Madaxweyne Xasan oo warqadihii aqoonsiga ka guddoomay Safiirrada Dalalka Sweden Iyo Holland – idalenews.com
Danjirayaashani uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ka guddoomay warqada Aqoonsi ee danjiranimo ayaa ka kala socday wadamada Sweden iyo Holland kuwaasii oo qeyb ka ah dedaalka beesha caalamka ay ku dooneyso in ay dib u soo celiyaan xiriirkooda Soomaaliya ay la lahaayeen.
Ambasador Mikael Lindvell oo ah danjiraha dowladda Swedan ay u soo magacaawday dalka Soomaaliya oo warbaahinta la hadlayay kadib markii warqadiisa aqoonsi uu gaarsiiyay Madaxweyaha dowaladda Soomaaliya ayaa tilmaamay in 20-sano kadib ay dowaladda Sweden farxad u tahay in ay soo celiyaan xirirkooda kala dhexeeyay Soomaaliya.
“Waxaan ahay safiirka Sweden ee Soomaaliya muddo 20-sano kadib waxaan aad ugu faraxsanahay in aan qabto howshaasi, waxaa jira dad Swedesh ah oo asalkooda Soomaali yahay kuwaasi oo qabta dedaalo ay dib ugu dhisayaan dalkooda Soomaaliya” ayuu yiri safiirka.
Dhanka kale Ambassador Mikael Lindvell waxaa uu isagoo ku hadlaya magaca dowladda Sweden uga tacsiyadeeyaya dadkii ku dhintay qaraxii waxushnimada ahaa ee kooxaha argagixisada shabaab ka geeysteenn magaalada Muqdisho.
“Anigoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Sweden waxaan aad uga tacsiyadeeynayaa shacabka Soomaaliyeed geeridii ku timid dadkii ku geeriyooday qaraxii bahalnimada ahaa ee kooxaha argagixisada ah ka geeysteen magaalada Muqdisho.”
Tan iyo markii dowladda Soomaaliya ay ka baxday KMG isla markaana ammaanka dalka Soomaaliya uu soo hagaagay waxaa soo badanaya wadamada Safaaradahooda ka furanaya magaalada Muqdisho taasi oo cadeeyneysa in xiririka caalamka iyo Soomaaliya uu soo noqday.
Xaflad lagu tageerayo Jubaland State oo ka dhacday Washington DC +Sawiro